Xawaaraha Bogga iyo Martidaada | Martech Zone
Xawaaraha Bogga iyo booqdayaashaada
Sabti, Agoosto 6, 2011 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Mid ka mid ah sababaha sida aadka ah ugu adag ama qaaliga u ah saameynta ayaa ah xawaaraha goobtaada ay ku raran tahay. Tani waa dagaal joogto ah halkan Martech integ isdhexgalka bulshada iyo xayeysiinta gaabis ayey ku tahay waqtiyada xamuulka bogga, hoos ayaan u mareynaa sidaa darteed waxaan marwalba isku dayeynaa inaan ku hagaajino dhowr habab. Waan ognahay inaan ku luminayno qaar ka mid ah booqdayaasha - gaar ahaan haddii ay jiraan gaadiid badan.
Shirkadaha qaar si dhab ah uma qaataan waqtiyada culeyska, laakiin waxay saameyn weyn ku leedahay awooda bartaada ee ku lug lahaanshaha iyo badalida macaamiisha. Xaaladda, Kissmetrics isku soo wada duuboo muuqaalkan oo muujinaya khasaaraha.
Haddii goobta e-commerce ay sameyneyso $ 100,000 maalintii, a Dib udhaca 1aad bogga labaad ayaa suura gal ah inuu kaagasaaro $ 2.5 milyan iibka lumay sanad walba.
Tags: ERPtaasoo keentaydhererka xariiqaSagehagaha warbaahinta bulshadatelevision
Maxaa Loo Isticmaalaa Infographics?
Hirgeli Adeegga Sawir-qaadista Sawirka